Umzi-mveliso weeglavu ezilahlayo |eTshayina eziLahlayo iiglavu Abavelisi, ababoneleli
Iiglavu zePlastiki eziLahlayo, iiglavu zesandla zePolyethylene zaMahala ezingaHlaziyayo ekuphekeni ukuCoca, ukufaka imibala kwiinwele, ukuhlamba izitya, ukuphatha ukutya.
【Iiglavu zePolyethylene aziNzalo】Ifanelekile kuzo naziphi na iiprojekthi ezimdaka onokuba nazo;kuquka ukupheka, ukucoca ikhitshi, okanye imisebenzi yezandla.
China Fctory Disposable Examination Nitrile iiglavu, Black, Red, Blue, Pinki
Ukulungelelana kunye neencam zeminwe ezenziweyo ukwenzela uvakalelo olubalaseleyo olubambekayo.
Isithintelo esinamandla - Kwikhitshi okanye ukucoca, ezi glavu zibonelela ngomqobo kwiikhemikhali, izivumba njl.
UMGANGATHO WANGAPHAMBILI: Yomelele kakhulu kwaye iyaxhathisa, i-elastic ephezulu kwaye ikhululekile ngakumbi kune-latex kunye ne-vinyl.
PHAMBILI KWILATEX: Isisombululo esifanelekileyo kubantu abanomdla kwi-latex yerabha yendalo kunye ne-donning powder
Ingena kwisandla sasekunene okanye sasekhohlo, Iminwe exutyiweyo yokuphucula ukubamba.Intendelezo kunye neminwe zikhontolongwe nto leyo ebonelela ngokufanelekileyo nangokukhuselekileyo
Isandla esigqwesileyo kunye nokhuseleko lomntu.I-Nitrile iyamelana nokugqobhoza inika umgangatho ophezulu wokhuseleko kulwelo, kwiigesi nakwizinto ezibukhali.I-non-allergenic kwaye ayicaphuki
Ukulungeleka okugqwesileyo, ubuntununtunu obuhle kunye nobuchule bokwenza imisebenzi emihle.Incam yomnwe yenziwe ngokucokisekileyo ukwenzela ukubamba ngcono ukunxiba kweglasi, izinto ezincinci, izixhobo kunye nezixhobo
Iiglavu zeNitrile ezingezizo ezoNyango eziMnyama zasimahla
I-Nitrile emnyama yokuthuthuzela ngokugqithiseleyo, i-Non-Sterile Durability, i-Powder-free, i-High Chemical Resistant, i-High resistant oil, i-Break Cleaner, kunye neeglavu azikhuli xa udibana ne-Oli.
Amandla aPhakamileyo, i-Puncture Resistant, iiglavu ze-Ambidextrous, ukugcina i-Tactile Feel.
Ilungele ukusetyenziswa kwimizi-mveliso, iSalon yeNwele "Iinwele zokufa", Ukucoca indlu yonke.Ukunyanzeliswa koMthetho, uLondolozo kunye nokuCoca, iZithuthi, ukuSetyenziswa kweShishini
Iigloves zeLatex ezilahlayo
I-MULTIPURPOSE - iiglavu ze-latex ezingenamgubo zikhululekile ukuba zisetyenziswe, isisombululo esifanelekileyo sokulungiswa kokutya, ukucocwa kwekhaya kunye nemoto, ukuhlamba izitya, ukuhlamba, ukupeyinta, umbala weenwele, ukudweba, ukulungiswa kwezilwanyana kunye nokunye.
Iiglavu zethu zepremium latex ezilahlwayo zikhuselekile njengokucoca indlu.Iikhafu ezinamaso zithintela ukukrazuka ngexesha lokunikela.
ILatex eLahlwayo 100 iiPcs ezingenamgubo
Yomelele kwaye iphezulu umgangatho: yenziwe ngezinto eziphucukileyo zelatex, amandla okhuseleko aphakamileyo, ukolula okuqinileyo ukulingana nesandla somntwana ngaphandle kokukrazula, ukucinezela okanye ukugqobhoza ngezikhonkwane.
Khusela izandla zakho kwaye uzigcine ucocekile: ilingana njengolusu lwakho ngokhuseleko olugqwesileyo, olutyebileyo ngokwaneleyo ukugcina izandla zomile kwaye zithambile ngaphandle kokujoja, ukuncamathela, okanye ukushiya intsalela, isixhobo esihambisayo esifanelekileyo sihlala sicocekile kwaye sicwangcisiwe.